Maitiro ekuisa AMD gpu pro madhiraivho muLinux Mint? | Kubva kuLinux
Maitiro ekuisa AMD gpu pro madhiraivho muLinux Mint?
Mhoro, izuva rakanaka, nhasi Ini ndinouya kuzogovana newe nzira yekumisikidza yakavanzika madhiraivha vanotipei yemakadhi eATI pamwe neeprosesa zvakare ine yakabatanidzwa GPU.
Yo Ndine hp notibhuku ine processor ye AMD A8 ine R5 mifananidzo, saka ndinogona kuisa vhezheni 15.7 yevatyairi ve AMD, asi zvinosuwisa kuti ndinofanira kunge ndine Xorg vhezheni 1.17, yandisina kana kubvira ini ndichishandisa 1.19.
Saka ini ndinogona kusarudza kushandisa AMDGPU PRO madhiraivha, kuitira kuti ndivaise pane yangu system.
Kuziva kana chipset yedu ichienderana neaya madhiraivha, kutanga tinofanira kuziva muenzaniso wedu, kune izvi isu tinofanirwa kuvhura terminal Ctrl + T uye nekuita unotevera kuraira:
Mune yangu kesi ini ndinokanda izvi:
Iye zvino nhanho inotevera ndeyekutarisa kuenderana, unogona kuzviita pano mune iyi link.
Kuva nechokwadi chose kuti zvinoenderana, nhanho inotevera ndeyekuona kuti isu tine kernel vhezheni 4.13 kana yepamusoro yakaiswa, uchipiwa izvo mushanduro pamberi peizvi, pane mhosva yekuti hapana odhiyo paunenge uchishandisa HDMI kubuda.
Kuziva kuti ndeipi vhezheni yatinayo, isu tinofanirwa kuita unotevera kuraira:
Inondipa inotevera mhedzisiro:
Kana zvisiri, iwe unofanirwa kuisa imwe yazvino kernel.
Nechekare nematanho aya, ikozvino kana isu tichaenda kuisa iyo AMDGPU PRO madhiraivha mune yedu system.
1 Dhawunirodha iyo AMDGPU PRO mutyairi
2 Kuisa iyo AMDGPU PRO mutyairi muLinux Mint
3 Blackscreen mhinduro
Dhawunirodha iyo AMDGPU PRO mutyairi
Kuti utore mutyairi Tinofanira kuziva kuti ndeipi shanduro girafu inoenderana nayo, mune iyi yekubatanidza yapfuura inotsanangurwa, kana iine vatyairi 16.40 kana 17.40.
Mune yangu nyaya inoenderana nezvose saka ndiri kuenda kumisikidza yazvino, chero, siya iyi link kune ese ari maviri.
Kuisa iyo AMDGPU PRO mutyairi muLinux Mint
Waita kurodha pasi, isu tinofanirwa kuburitsa iyo yakadzingwa faira, yeizvi isu tinovhura terminal uye tozviisa isu pachedu mufaira umo iyo faira rakadzingwa uye nekuita unotevera kuraira:
Pano Iwe unofanirwa kushandura rairo yeiyo vhezheni yemutyairi wawakadhinda.
Iye zvino apa ndipo apo isu tinofanirwa kugadzirisa iyo amdgpu-pro-yekuisa faira, iyo iri mukati meye mhedzisiro dhairekitori mushure mekuburitsa faira.
Shandisa mupepeti wesarudzo yako, unofanira kuwana inotevera tambo.
Uye ivo vanochinja ubuntu kune linuxmint zvinoita kunge seizvi:
Chekupedzisira, kana iwe ukadzora vhezheni yepamusoro, unofanirwa kubvisa zvinotevera kubva mukodhi:
Iye zvino mava kuisa kuisa madhiraivha.
Zvekuisa isu tinongofanira kunyora zvinotevera:
Cherechedza: havafanirwe kushandisa SudoKana zvichidikanwa, mvumo yekusimudzira ropafadzo inokumbirwa.
Uye isu tinotangazve, mune dzimwe nguva zvinodikanwa kuti uite ma reboots maviri.
Ivo vanogona kushandisa anotevera nharo zvichienderana nenyaya.
Muchiitiko changu ndinotora –px nekuti, kana ini ndikaisa imwe, yakandipa kukanganisa kwekisiki.
Sezvo ini ndanga ndichitaura, kana kumisikidzwa kwakakodzera kusingaitwe, unogona kuwana nhema skrini, asi usavhunduke, ine mhinduro
Sezvandataura mune yangu kesi, ndaifanira kuisa ne - px nharo, saka iri sKana kumisikidza kwanga kusingashande, vanofanirwa kusunungura uye kuisazve neimwe nharo, kuti uninstall, ingo nyora.
Imwe mhinduro ndeyekugadzirisa iyo grub, iyo nzira iri kugadzirisa inotevera tambo, kune izvi ivo vanoshandisa mupepeti wezvavanoda, mune yangu kesi ini ndinoshandisa nano:
Ivo vanowedzera amdgpu.vm_fragment_size = 9 mune inotevera mutsara, zvinoita kunge seizvi:
Ivo vanochengetedza shanduko uye kugadzirisa iyo grub.
Kana vasingakwanise kushandisa inotevera.
Pakupedzisira, ndinotenda zvikuru kune vanhu vari paLinux Mint maforamu sezvo ivo vainditungamira nemutsa uye zvakare kune vashandi vakagovana nzira. Kwete zvekare kusvika panguva inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Maitiro ekuisa AMD gpu pro madhiraivho muLinux Mint?
Iwe unogona here kutsanangura mashandisiro ekushandisa nharo?
Iwe unoti kana uchiisa? ./amdgpu-install -y -px?
Nzira yekufambisa kana kuteedzera mafaera kana maforodha muLinux?
MagpieOS: kugoverwa kweBangladeshi kunoenderana neArch Linux